ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: May 2012
ဒီလိုကျတော့ လည်း သူ့ ခြေတုကအသုံးဝင်တယ်...
တက်နိုင်တဲ့ သူယူလို့ များဆိုလေသလားပဲ...
သူတို့ ဆီမှာလည်း ဒီ သုဘရာဇာလုပ်ငန်းက အပြိုင်အဆိုင်ဈေးကွက်စနစ်ရှိတာပါပဲလား...
﻿ယခင်နဲ့ ယခုကိုရီးယား ဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာသာကြည့် တော့ ....
သူတို့ တောင်ဖြစ်နိုင်သေးယင် ...ကိုယ်တွေလည်းဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလည်း...
ဘုရားဟောကျမ်းစာ လာရှိသည်နှင့် အညီ... သေရည်အရက်သူနှစ်သက်ရတာပါတဲ့ ...
ဟုတ်ကဲ့ ....အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးလည်းစက်ထဲထည့် လိုက်ပါရစေ....
အထူးကွန်မန်ဒိုလေ.... သေနတ်သမားနှစ်ယောက်လောက်ကို သနားတယ်...
အင်း အတည့် သာဘာသာပြန်လိုက်ရယင်တော့ ...
ငယ်တုံးလေး ခိုင်းရတာ...ကြီးလာယင် ကြမ်းတိုက်ခိုင်းယင် လုပ်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး...
ယခင်နဲ့ ယခု ဒီလိုကွာပါတယ်....
ဒီလိုကားမျိူးတော့ သူတို့ ဆီမှာ ( ရုရှားမှာ ) လည်းရှိတယ်ဗျာ...
မိန်းမနဲ့ ယောကျာင်္း အဲဒီလိုကွာပါတယ်....
အရာရာယုံလို့ မရဘူးနော်....တော်ကြာ ဒီလိုရွှေရည်စိမ်ထားတဲ့ ကားကို
တစ်စင်းလုံးရွှေနဲ့ လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီး လိမ်သွားဦးမယ်...
အမေကတော့ ငါ့ သားလေး ဘေးဒုက္ခများတွေ့ နေပြီလားလို့ စိုးရိမ်ပါတယ်...
အဖေကတော့ဒီကောင်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေပြီ ( သူ့ လိုပဲ ) လို့ ထင်ပြီး...
သူငယ်ချင်းကတော့ ဒီကောင်အိပ်နေတုံးလို့ ထင်တတ်တယ်...
အစ်ကိုကတော့ ဒီကောင်ဂိမ်းဆော့ နေလို့ ဖုံးမဖြေတာလို့ ယုံပြီး...
ချစ်သူကောင်မလေးကတော့ တစ်ခြားကောင်မတွေနဲ့ ပျော်မြူးနေတာဖြစ်မှာပေါ့ လို့ 
ကျွန်တော်ကတော့ ဖုံးပျောက်လို့ အသည်းအသန်ရှာနေရပါတယ်ဗျာ...
Posted by peter kyaw | at 2:11 AM | 1 comments
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွင် သီဆိုမိလို့ သေဒါဏ်ပေး...
မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကမိလို့ ဘ၀ဆုံးတော့ မလို့ ...
Picture used for illustrative purposes only. (GETTY/GALLO)
မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် သီဆိုကခုန်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် အမျိူးသမီး ၄ ဦးနှင့် အမျိူး
သား ၂ ဦးတို့ အား ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် သေဒါဏ်အပြစ်ပေးရန်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပါ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ မြို့ တော် အစ္စလာမ်မာဘတ်၏ မြောက်ဖက် ၁၇၆ ကီလိုမီတာကွာဝေးသည့် 
ကိုဟစ်စတန်နယ်မှ တောင်တန်းများထူထပ်သည့် ဝေးလံသီခေါင်သည့် ရွာကလေးတွင်ကျင်းပ
သည့် အခမ်းအနားတွင် ထိုလူ ၆ ယောက်တို့ ပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲနေသည်ကို ဖုံးဖြင့် ရိုက်ကူး
ထားသည့် ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ ပြီးနောက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက အမိန့် ချမှတ်
တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည့် ( အမျိူးသမီးများ အမျိူးသားများနှင့် ရောနှောကာနေထိုင်ခြင်း၊
သီဆိုကခုန်ခြင်းမပြုရဟုသော) လူမျိူးစုဆိုင်ရာ ဓလေ့ ထုံးစံအား အာခံကာ ဂါဒါရွာကလေးတွင်
ယခုကဲ့သို့ အတူကခုန်သီဆိုခဲ့ ခြင်းကြောင့်ဒေသခံဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက အပြစ်ပေး
ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ထိုဒေသရှိ အစိုးရအုပ်ချူပ်ရေးဆိုင်ရာတွေကဆိုပါတယ်...
" ဒေသခံဗလီဆရာတွေက ထိုဗီဒီယိုကလစ်ထဲတွင်ပါဝင်သည့် အမျိူးသမီး ၄ ဦးနှင့် အမျိူးသား၂
ဦးတို့ အား သတ်ပစ်ရန် အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ ထိုအရပ်ဒေသဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိ အဘဒူ
မာဂျစ်အဖရီဒီ ကအေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" အစတုံးကတော့ အမျိူးသားများကိုအယင်သတ်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့်
၎င်းတို့ ထွက်ပြေးသွားသွားလို့ အမျိူးသမီးတွေ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သက်သာရာရ
သွားခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်... ကျွန်တော်ကတော့ ၎င်းတို့ ကိုဖမ်းဆီးဖို့ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်လိုက်
ပြီး သတင်းကိုနားစွင့် နေပါတယ်... အမျိူးသမီးတွေကိုတော့ ၎င်းတို့ နေအိမ်တွေမှာပဲနေခိုင်းထား
ပါတယ်" လို့ ထိုအရာရှိကဆိုပါတယ်...
ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာ လူမျိူးစုနှစ်စုအကြား အချင်းများကြရာမှ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်ခဲ့ ရတာဖြစ်
ပြီး ယောကျာင်္းများနှင့် မိန်းမများ ရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့ သက်သေမရှိပါဘူးလို့ လို့ အဖရီဒီ ကဆို
" ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ သူတို့ အားလုံး သီးခြားစီ ( အမျိူးသား၊ အမျိူးသမီး သီးသန့် ) ခွဲနေကြတာ
တွေ့ ရပါတယ်... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထိုဖုံးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုကြည့် ခဲ့ ရပါတယ်... အဲဒီအ
ထဲမှာပါတာက အမျိူးသမီး ၄ယောက်သီချင်းဆိုနေကြပြီး အမျိူးသား ၁ ယောက်ကလည်း တစ်
ခြားသတ်သတ်နေရာမှာ ကနေတာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်အမျိူးသားတစ်ယောက်ကလည်း နောက်
ထပ်ရိုက်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ထိုင်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူကဆိုပါတယ်...
" ဒါဟာ လူမျိူးရေးဆိုင်ရာ မုန်းတီးမှု၊ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပါတယ်... ဒီဗီဒီယိုကလစ်က လူမျိူးစုတစ်
စုကို သိက္ခာချဖို့ စီရင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်...." လို့ သူကထပ်ပြီးပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အနည်းဆုံး အမျိူးသမီးပေါင်း ၉၄၃ ဦး ၎င်းတို့ ၏မိသားစုသိက္ခာကျ အရှက်
ရစေမှုဖြင့် လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်က အသတ်ခံခဲ့ ရတယ်လို့ နိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့် အရေးကော်မရှင်
အဆိုပါကိန်းဂဏာန်းများက ရှေးရိုးစွဲမွတ်ဆလင်ဝါဒီများကြီးစိုးသည့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဒုတိယ
တန်းစားအဖြစ်သတ်မှတ်ချိူးနှိမ်ခံရသည့် အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုခံရသည့် ပမာ
ဏ မည်မျှမြင့် မားသည်ကို ညွှန်ပြနေပါတယ်...
Labels: news: emirates 247.com
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်းများ....
ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံး သတို့ သမီးဝတ်စုံ....
လုပ်စရာမရှိကြောင်ရေချိူးဆိုသလိုပေါ့ ....အဲဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ ဘာများအကျိူးထူး
သွားမလဲ ....ဒီမှတ်တမ်းဝင်လို့ လည်းဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး...
Longest wedding dress train﻿
ကမ္ဘာ့ သက်ရှိ အရပ်အပုဆုံးလူသား....
ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး အမွှာလူသားပါ....
မျက်လုံး ၂ လုံးစလုံးဖုံးကွယ်ထားပြီး ပစ်လွှတ်လိုက်သောမြှားများကိုဖမ်းယူနိုင်သူပါ....
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်တွေကို ဖောက်နေယင်း တစ်မိနစ်အတွင်း ၂၆ ခု အမိအရဖမ်းယူ
ပုလင်းဖုံးကို ခေါင်းဖြင့် တိုက်ပြီးဖွင့် နိုင်သူ...
တစ်မိနစ်အတွင်း ပုလင်းအဖုံးပေါင်း ၂၄ ခုကိုခေါင်းဖြင့် တိုက်ကာဖွင့် နိုင်သူကတော့ 
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဟမ်းဘာ့ ဂ်မြို့ မှာ ပြုလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ တဲ့ အာမက်တက်ဖ်ဇီ ဖြစ်ပါတယ်...
အသက်အကြီးဆုံး ယောဂဆရာမကြီးပေါ့ ...
ဒီမှာတော့ အသက်ကိုမဖော်ပြထားပါဘူး... ၈၀ ကျော် ၉၀ တော့ ရှိပါလိမ့် မယ်...
Oldest yoga instructor﻿
လက်စလီတစ်ပ်တွန် အမည်ရှိအမျိူးသမီးဟာ ခရီးဆောင်အိတ်အတွင် သူမတစ်ကိုယ်လုံး
၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ ၅.၄၃ စက္ကန့် သာ အချိန်ကြာပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ပြဇတ်မင်းသမီး၊ သရုပ်ဆောင်....
အစ္စရေးနိုင်ငံမှ သရုပ်ဆောင်အမျိူးသမီးကြီး ဟန်နာမာရွန် ဟာပြဇတ်ကလာခဲ့ တာ နှစ်ပေါင်း
၈၃ နှစ်ရှိခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
ဓါတ်ပုံကြည့် တာနဲ့ တင်လုံလောက်နေပါပြီ....ဘယ်လောက်ရှည်တယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာ
ဂျပန်နိုင်ငံက ဆပ်ကပ်ပြပွဲတစ်ခုမှာ ကြိုးတစ်ချောင်းထဲမှာကိုပဲ ခွေး ၁၃ ကောင်က တစ်ပြိုင်
နက်ထဲ ခုန်နိုင်ခဲ့ ကြတာမို့ တစ်ကြိမ်တည်းအများဆုံးကြိုးခုန်တဲ့ သည့် ခွေးအရေအတွက်အများ
ဆုံး စံချိန်တင်သွားခဲ့ ပါတယ်....
Most dogs skipping on the same rope﻿
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဘာရင်တန်အာဗင် ဟာစက်တစ်လုံးတပ်လေယာဉ်လေးဖြင့် 
ကမ္ဘာ တစ်ပါတ်ပျံသန်းမောင်းနှင်နိုင်ခဲ့ တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးလူသားဖြစ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံးအမျိူးသမီး အိန္ဒိယနိုင်ငံသူ ဂျိူတီအမ်ဂီ ဖြစ်ပါတယ်...
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ ဆန်ဒိုဗယ်အရပ်မှ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ဘရစ်ဂျစ်ဂျော်ဒန်ဟာ
( အရပ် ၂ပေ ၃လက်မ ) သာရှိတဲ့ ထူးဆန်းအံ့ ဖွယ်ဆုရှင်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အသက် ၂၀
အရွယ်ရှိ မောင်ဖြစ်သူ ဘရက်ကလည်း သူမလိုပဲအရပ်ပုလို့ ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး အရပ်
အပုဆုံး မောင်နှမ ဘွဲ့ ကိုပူးတွဲရရှိခဲ့ ကြပါတယ်...
Bridgette Jordan, 22, from Sandoval, Illinois, is 67 cm (2 ft.3in.) tall and isamultiple record holder, as she is also one of the shortest living siblings with her 20-year-old brother Brad.﻿
ဒီခွေးမကြီးကလည်း ပုံကြည့် ရုံနဲ့ ကမ္ဘာ့ အရပ်အမြင့် ဆုံးခွေးမ ဆိုတာသိသာနိုင်ပါတယ်...
ခေါင်းပေါ်တွင် ရေဖန်ခွက်အား ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားယင် လှေကားထစ် ၁၀ ထစ်
ကိုဆင်းနိုင်တဲ့ အတွက် ဒီ သြစတေးလျန်းသိုးထိန်းခွေးဟာလည်း ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်
Most steps walked down byadog facing forwards balancingaglass of water﻿
This Australian Shepherd has walked down 10 steps while balancingaglass of water.﻿
စကိုင်းဘရိုဘာ့ ဂ် အမည်ရှိတဲ့ သူကလေးကတော့ တင်းနစ်ရိုက်တံတစ်ခုအတွင်း ၃ မိနစ်
အတွင်း ၇ ကြိမ်တိတိ ၀င်နိုင်ထွက်နိုင်ခဲ့ လို့ အကြိမ်အများဆုံးဝင်နိုင်ထွက်နိုင်သူအဖြစ် ထူးဆန်း
အိမ် အမည်ရှိရုပ်သံစီးရီးရိုက်ကူးခဲ့ တဲ့ ဟူးလော်ရီတစ်ယောက် ဇတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ်ကို
ဒေါ်လာ ၄ သိန်းရခဲ့ လို့ သရုပ်ဆောင်ခအများဆုံးရတဲ့ ရုပ်သံဇတ်လမ်းတွဲ မင်းသား
အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ ရပါတယ်...
Hugh Laurie of FOX’s "House" pulls in $400,000 per episode.﻿
သံကွင်း၊ သံချောင်းတွေ အများဆုံးထိုးစိုက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ အကြောင်ဆုံးအမျိူးသားပေါ့ ...
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးအာဖရိကပုံစံ ဆံပင်ပိုင်ရှင်ပါ....
သူ့ ဒါဏ်ကတော့ ခံနိုင်မယ်မထင်ဘူး...
Posted by peter kyaw | at 2:07 AM |0comments
တိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ လ၀န်းတံတားရဲ့ လှပဆန်း
နံနက်ခင်းကားမြူနှင်းတို့ အုပ်ဆိုင်းကာ ငြိမ်သက်အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်လျက် လေနုအေးကလေးကလည်း
တိုးတိတ်ငြင်သာစွာရှိနေသည်မို့ တိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းဖွယ် နေရာကလေးကား အိမ်မက်ထဲမှ
ပုံပြင်ဆန်ဆန်၊ ဂန္တ၀င်ဆန်ဆန်မြင်ကွင်းကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်နေပါတော့ တယ်...
ကြည်လင်အေးမြကာ ငြိမ်သက်နေသည့် ရေပြင်ကလည်း ပါတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းအား ထင်ဟပ်သရုပ်ဖော်နေ
သည်မို့ စိတ်နှလုံးအား ညို့ ယူဖမ်းစားနိုင်လွန်းလှပါတယ်...
ဒီလိုရှုခင်းမျိူးကြောင့် လည်း ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံအား အနောက်နိုင်ငံများအတွက်တော့ ဒီလ်ဟာဖော်မိုဆာ၊ သာ
ယာလှပသည့် ကျွန်းဟု နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားခဲ့ တာ မဆန်းပါဘူး...
တိုင်ဝမ်ကျွန်းမြောက်ပိုင်း၊ တိုင်ပေမြို့ မှ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ရှိ လ၀န်းတံတား ရဲ့ အပြာရောင်မိုးကောင်း
ကင်နောက်ခံနဲ့ ဓါတ်ပုံအား bbe022001 ဟုသာရေးထားသည့် ပါရမီရှင်ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ဦးက Flickr တွင်
ဒါတောင်မှ အဆိုပါပန်းဥယျာဉ်ဟာ တိုင်ဝမ်နိုင်ံရဲ့ စက်မှုဇုံတွေအလယ်မှာနီးကပ်စွာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး
တိုင်ပေမြောက်ပိုင်း နေဟူးစက်မှုဇုံဟာ အိုင်တီလုပ်ငန်းနဲ့ ရှော့ ပင်းစင်တာအဆောက်အဦးကြီးများတည်ရှိ
သို့ သော်လည်း ထိုဥယျာဉ်၊ နတ်စင်၊ ဘုရားပုထိုးတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့လွမ်းမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ 
တောင်တွေရဲ့ ရှုခင်းကတော့ မြင်ရသူတွေအတွက် မင်တက်အံ့ သြ၊ ငေးမောစရာပါပဲ....
တိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာ မီတာ ၃၀၀၀ ကျော်အမြင့် ရှိတဲ့ တောင်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး တစ်မူထူးခြားတဲ့ တော
တောင်ရေမြေသဘာဝတွေကြောင့် အဆန်းတစ်ကြယ်သာယာလှပတဲ့ ရှုမြော်ခင်းတွေ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေ
သဘာဝတရားရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်၊ ဆန်းကြယ်လှပပုံတွေကို ရှုစားကြည့် ပါဦး....
မြူနှင်းများကြားက ထိုးထွက်လာတဲ့ နေလုံးကြောင့် သက်ငြိမ်ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုဖြစ်နေ
တဲ့ဓါတ်ပုံ....
ပကတိငြိမ်သက်နေတဲ့ ရေပြင်နဲ့ ပါးလွှာတဲ့ မြူနှင်းဝေ့ နေပုံက ကန်ရေပြင်မှာ တစ်သားထဲ
အံ့ သြစရာကောင်းလောက်အောင်သာယာလှပတဲ့ ရှုခင်းတွေမို့ အိပ်မက်ထဲက၊ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်
ထိုပုံတွေအားလုံးကြည့် ချင်ယင်တော့ အောက်ပါဖလစ်ကာဆိုဒ်မှာမြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်...